Waa mahad illaah Danta oon Murkacan Mida loo dib jiray waa midnimada qaran. W/Q Maxamed matan gabalax (moto).
Thursday August 02, 2018 - 01:10:56 in Maqaallo by Wariye Khaliil Barre
(Inaad kuftaa ceeb maaha laakiin inaad kici kari weydo ayaa ceeb ah.)
(Inaad kuftaa ceeb maaha laakiin inaad kici kari weydo ayaa ceeb ah.) Qormadan waxay u jeedadeedu tahay guul inaan u qiro oo hambalyeeyo cidkasta oo qayb ka qaadatay gallada qaran ee lagu go'aamiyey shaqaaqadii ka dhacday Degmada ceel afweyn ee mudada soo jiitantay qoraalka uma dhigayo inaan cid masuugo oo miisaankii ay lahayd aan meesha ka saaro laakiin waxay iga tahay inay mudan tahay in lagu farxo midnimo dhalata iyo meel qaranka boog ku ahayd oo la daweeyey.
Bulshada ceel afweyn waxkasta oo hore uga khaldamay oo ka dhacay dhexdooda iyada qadar alle ayeynu u daynaynaa iyo in shaydaan ka dhex shaqeeyey walaalo ood,Arlo iyo il biyo ka dhaxaysay waxay maanta garteen inay soo gunaanadan oo go'aanka halka laga gaadhay ay qaataan waxaynu leenahay Alle ha idin ku garab galo haydinkuna asturo xilka nabadda xejiya oo adkeeya sharafta iyo ehelnimada dhexdiina annagana taasa na farxad gelinaysa dalka iyo dadkana wax taraysa. (Inaad kuftaa ceeb maaha laakiin inaad kici kari weydo ayaa ceeb ah.)
sida gacanta laysaga qabsaday arrinkaa loogu dhabar adaygay Xukuumad iyo xilkaska ummaduba waxay ahayd talaabo muujinaysa isku tashiga iyo isku tiirsanaanta dadkeena. culimada ,caalimka ,cuqaasha iyo Codkarka hawshaa guntiga u giijistay go'aankana ka soo saaray abaal gud iyo maamuus ayey mudan yihiin. Geesiyo badan ayaa jira oo garab rarato u noqday gogosha iyo go'ana ceel-afweyn dhigtay mudadii hawshu bilaaban tahay ilaa dhammadkeedi Hadaan xuso xiligan waxa xaqiiqo ah in wasiirka wasaarada arrimaha gudaha iyo geeshkii uu hogaaminayey ay ahaayeen kuwo u go'ay mudadaas gabood dhaxanta ay ka galaana diiday oo gacalka dhexdiisa jilbaha ku aastay.
Maxamed kaahin axmed wuxuu noqday Masuul gurigiisa aan ku gam'in ilaa maalinkaa uu u dhiilo dhaansaday gelida hawshaa waajib qaran ayuu gutay isaga iyo garbihii uu ku duulayey ee danta qaranka u hiiliyey. (Nina dhaqashuu kugu dhabar jabay nin dhuunuu ku dhex joogaa). Waxba yaanan ku dheeraan waajib gudashada maxamed kaahin iyo bahdiisa laakiin waxaynu dhammaanteen qiraynaa in cidkasta oo hawshaa gacan ka geysatay ay guul aakhiro iyo ifka ahba gaadheen inagana dab dhexdeena ka baxayey bakhtiiyeen. waxkastaana awooda alle ayey ku hirgaleen isagaana mahad oo dhammi u sugnaatay insha allaah dadka walaalaha ahna qalbigoda ha isu xaadho.
W/Q Maxamed matan gabalax (moto).